मेरो पहिलो महिनावारी : पीडा, डर र परिवारको माया « Janata Samachar
मेरो पहिलो महिनावारी : पीडा, डर र परिवारको माया
सम्झिदा नराम्रो लाग्यो मलाई...
मलाइ एक्कासी रुन मन लाग्यो, डर लाग्यो, दुखेको पेट झन् बेस्सरी दुख्न लाग्यो । के गरौँ, कसो गरौँ झैँ भयो । मेराे सानाे दिमागमा डर र त्रासले डेरा जमायाे । म कुदेर आमाकहाँ गएँ । कसरी भनौँ, के भनौँ झैँ भयो । डर पनि लाग्यो । एक्कासी रुन थालेँ । आमाले मलाई फकाउँदै सोध्नुभयो, ‘के भयो ? भोक लाग्यो ? कसैले केही भन्यो ? किन रोएको ? मैले रुदै भने, सानो पेट दुख्या छ, भित्री कपडामा कसरी हो कसरी रगत देखा पर्यो ।’
मात्र १२ वर्षकी भएकी थिएँ म । १२ वर्ष पुग्दासम्म कहिल्यै त्यसरी दुखेको थिएन मेरो पेट । बिस्तारै दुख्दै दुख्दै एक्कासी भक्कानिने गरी मेरो पेट दुख्न थाल्यो । यसो सम्झिन खोजेँ हिजो अमिलो पिरो पनि केही खाएको सम्झना भएन । नत्र पखाला लाग्नलाई दुखेको हो भन्ने सोच्न पनि सक्थेँ ।
कसरी यो दुखाई निको पार्न सक्छु भन्ने उपाय सोच्न लागेँ । एक रुपैयाँमा आउने एक प्याकेट हाजमोला मेरो दुखाईको एकमात्र असली औषधी हो भन्ने उपाय मेरो कलिलो बुद्धिले सोच्न लाग्यो । उपाय सोच्न सकेकोमा म दङ्ग भएँ । कुदेर गएर एउटा हाजमोला किनेर उत्तिखेर नै खाएँ पनि । तर त्यो मेरो उपायले छेउ टुप्पो पनि काम गरेन । मलाई दिक्क लाग्यो । पेटले दुखाई कम गर्न केही उपाय गर भनेको जस्तो भान हुँदैथियो । मलाई कता कता ट्वाइलेट जाउँजाउँ पनि भइरहेको थियो । यसै बीचमा म ट्वाइलेटभित्र पसेँ । पिसाब गर्दैगर्दा रातो केही बगे झैँ देखेँ । मलाई डर लाग्न थाल्यो । यसोभित्री कपडामा हेर्ने दुस्प्रयास गरेँ । त्यहाँ त झन् रातो रगत लतपत्तिएको रहेछ । अब भने म कत्ति हो कत्ति आत्तिएँ ।
मलाइ एक्कासी रुन मन लाग्यो, डर लाग्यो, दुखेको पेट झन् बेस्सरी दुख्न लाग्यो । के गरौँ, कसो गरौँ झैँ भयो । मेारे सानाे दिमागमा डर र त्रासले डेरा जमायाे । म कुदेर आमाकहाँ गए । कसरी भनौँ, के भनौँ झैँ भयो । डर पनि लाग्यो । एक्कासी रुन थालेँ । आमाले मलाई फकाउँदै सोध्नुभयो, ‘के भयो ? भोक लाग्यो ? कसैले केही भन्यो ? किन रोएको ? मैले रुदै भने, मलाई पेट दुख्या छ, भित्री कपडामा कसरी हो कसरी रगत देखा पर्यो ।’
यति भनेपछि आमाको अनुहारमा हेर्ने प्रयास गरेँ । आमा मुसुक्क हाँस्नु भयो र भन्नूभयो ‘सबै केटी मान्छेलाई उमेर पुगेपछि यस्तै हुन्छ । महिनामा ४ दिन यस्तै हुन्छ । अब तेरो पनि शुरु भयो ।’
मलाई झल्यास्स याद आयो मेरो काकाको छोरी पनि पहिलो पल्ट महिनावारी हुँदा काका, दाइ र भाइले मात्र होइन केटा मान्छे कसैले नदेख्ने गरी सात दिनसम्म स्कूल नै नपठाई लुकाएर राखिएको थियो । मैले सोचेँ अब म पनि कसैले नदेख्ने गरी लकेर बस्नुपर्छ होला, स्कूल पनि जान नपाउने भएँ । सम्झिदा नै नराम्रो लाग्यो मलाई ।
उत्तिखेरै आमालाई सोधिहालेँ, आमा अब म पनि लुक्नुपर्छ हो ? आमाले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, ‘पर्दैन ।’ एकैछिन् म छक्क परेँ म चाहिँ किन लुक्नु नपर्ने होला । खुशी पनि लाग्यो । उत्सुकताका साथ मैले आमालाई सोधिहालेँ, ‘काकाकी छोरी त सात दिनसम्म लुकेकी थिइन नि त कोही पनि केटा मान्छेले नदेख्ने गरी, स्कूल पनि गएकी थिइनन् । किन त ? आमाले दिक्क मान्दै भन्नुभयो, ‘अन्धविश्वासी भए काका काकी । महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो भन्ने कुरा बुझेनन् । आराम गर्नु त पर्छ तर भान्छामा नै पस्न नहुने होइन, कसैलाई हेर्न नै नहुने होइन, बोटबिरुवा छुनै नहुने होइन भन्ने कुरा बुझेनन् । त्यसैले लुकाएर राखे, स्कूल पनि पठाएनन् ।’
ओहो ! मेरा बाआमा अशिक्षित हुँदा पनि कति बु्ज्झकी, कति ज्ञानी, कति राम्रा, कति भलाद्मी । भान्छामा चिया पकाउन छिर्दै गर्दा मैले सोचेँ । म अतिनै खुशी थिएँ, सन्तानमा म पहिलो छोरी थिएँ जसले पहिलो महिनावारीमा लुक्नु परेन, भान्छामा परिवारसगैँ बसेर खान पाएँ, बोटबिरुवालाई छुन पाएँ, छुवाछुत बार्नु परेन, महिनावारी जस्तो जटिल समयमा आमा, दाजु र बाबाको साथ, सहयोग र न्यानो माया पाएँ । ओहो ! म कति आशिशीत छोरी ।
महिनावारी एउटा प्राकृति प्रक्रिया हो । जसलाई हामी सबैले बुझेको हुनुपर्छ । महिनावारीको समयमा महिलालाई फरक ठाँउ र फरक ओछ्यान होइन मायालु भाव, साथ र सहयोगको जरुरत पर्छ ।
महिनावारीको समयमा महिलालाई कम्तिमा पनि चारदेखि ६ दिनसम्म अरु दिन भन्दा थप पौष्टिक खानेकुराको आवश्यकता, सरसफाई र आरामको जरुरत पर्छ । परिवर्तन आफैबाट शुरु हुन्छ । एक कदम आफू बढाउने कोशिस गराैँ बाँकी कदम अघि पछिकाले पक्कै बढाउनेछन् ।
त्यो मध्यरातमा कल पिकअप नभएको भए !
एम्बुलेन्स चालक सिटमै निदाएका थिए । धेरै दिनबाट सुतेको छैन भन्दै पनि थिए । मामाले
जति लागे पनि शव जलाई दिनुहोस् !
आफन्तहरु चाहेर पनि पुग्न सक्दैनन् । समयको अभाव, संक्रमणको डर, यातायातको असुविधा, निषेधाज्ञा थुप्रै अप्ठ्यारा
नागरिकको करबाट तलब–भत्ता खाएर सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हिड्नेहरुले स्वास्थ्य संवेदनशीलताप्रति ध्यान दिएको जस्तो देखिदैन
कोभिडको कहरमा मैले भोगेको तितो अनुभव
बिरामी भएको आफ्नै बाउलाई स्याहार सुसार गर्न छोडेर हिड्छन् । टाढैबाट भए पनि सुरक्षाका उपाय